Ngemva kweminyaka engaphezu kwengu-10 ukuthuthukiswa okuqhubekayo kanye emisha, GOLDEN laser isibe nomkhiqizi China anothile futhi abaziwa umhlaba wonke of imishini laser. Emkhakheni wezingalo ephezulu digital imishini laser yokukhiqiza, laser GOLDEN isungule ehola ubuchwepheshe kanye brand zako. Ikakhulukazi emkhakheni izindwangu, izimpahla nezezimboni izindwangu nezimo laser izicelo, laser GOLDEN isibe brand China anothile.
Gxila ekunikezeni laser isicelo digital, Automated nohlakaniphe izixazululo.
- Usizo bendabuko izinhlelo ukukhiqizwa yezimboni uthuthukela ku-digital, nezimo zokuthuthukiswa ezintsha.
Laser GOLDEN is ezikhethekile-R & D, ukukhiqiza kanye marketing CO2 laser cutting umshini ,galvanometer laser umshini futhi fibre laser cutting umshini . Umugqa umkhiqizo ihlanganisa onobuhle ezingaphezu kuka-100 ezifana laser cutting, laser oqoshiwe, laser lokubeka uphawu, laser perforating, kanye laser ibhuloho.
Izicelo ihlanganise ukunyathelisa digital, izindwangu, izimpahla zokugqoka, lesikhumba izicathulo, izindwangu zezimboni, nokunikela, ukukhangisa, ukunyathelisa ilebula futhi emabhokisini electronics, ifenisha, umhlobiso, ukucutshungulwa metal kanye nezinye izimboni eziningi. Inani imikhiqizo kanye nobuchwepheshe usuthole patent kazwelonke kanye copyright isofthiwe, futhi ube CE futhi FDA ukwamukelwa.
KUSUKELA YONYAKA KA-2000
Cha OF KWEZISEBENZI
Sales IMALI NGO-2017
Ukuze wonke la mashumi eminyaka, GOLDEN laser abantu abasabela kahle kulokho okufunwa emakethe zokukhiqiza ezihlakaniphile. Hlanganisa izinsiza zangaphakathi umkhakha, futhi sihlanganise ubuchwepheshe ngolwazi ukuze udale ezihlakaniphile workshop ukuphathwa izixazululo. Ngesikhathi ekufezeni ukukhiqizwa ezihlakaniphile, futhi ikulethela lula real-time idatha ukukhiqizwa trace ikhono, real-time esishintshayo lokuqapha real-time, kancane kancane ukunciphisa Ukungenela komuntu ngenkathi ngcono izinga umkhiqizo kanye ukulethwa isikhathi, alethe okuningi ukuphathwa lula.
Uma sibheka phambili esikhathini esizayo, GOLDEN laser ngeke banamathele umkhakha ukufohla njengoba isu ehamba phambili ukuthuthukiswa, njalo ukuqinisa ubuchwepheshe emisha, ukuphathwa emisha nokumaketha emisha njengoba nje nengaphakathi emisha uhlelo, futhi balwela babe umholi laser ezihlakaniphile, ngokuzenzakalela ne-digital izixazululo isicelo.
UMHLABA WONKE UKUKHANGISA NETWORK
Ngo izimakethe zaphesheya, GOLDEN laser isungule ovuthiwe inkonzo ukumaketha inethiwekhi emazweni angaphezu kuka-100 futhi izifunda emhlabeni wonke.
- Golden Laser isibe ekudayiseni imikhiqizo laser e China.
Amanye amakhasimende YETHU
IMISEBENZI AWESOME UKUTHI TEAM'VE YETHU nomthelela amaklayenti ethu!
"URita, Njengenjwayelo isevisi yakho yekhasimende kuyinto enhle kakhulu. You guys bebelokhu omkhulu futhi, uma sinomuzwa kudingeka ziyasiqhumisa uzobe ucingo yethu yokuqala."